Filohan’ny HCC: “Izahay ihany no mahazo mikitika voka-pifidianana” | NewsMada
Filohan’ny HCC: “Izahay ihany no mahazo mikitika voka-pifidianana”
Vita ny latsa-bato. Andrasana ny voka-pifidianana. “Izahay ihany no mahazo mikitika izany”, hoy ny HCC.
“Izahay ihany no mahazo manitsy ny valim-pifidianana”, hoy ny fanazavan’ny filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), Rakotoarisoa Jean-Eric, teny Ankadindravola Ivato, omaly, momba ny famoahana voka-pifidianana.
Aoka hazava tsara ny ao anatin’ny lalàna: mamoaka voka-pifidianana vonjimaika ny Ceni fa tsy mahazo mikitikitika voka-pifidianana izay miakatra isaky ny biraom-pifidianana tsirairay. Raha misy ny fanitsiana ilaina, na avy amin’ny fitoriana na avy amin’ny fijerin’ny HCC ny voka-pifidianana.
Izay no mahatonga ny hoe tsy mitovy ny voka-pifidianana avoakan’ny Ceni sy izay avoakan’ny HCC, araka ny fanazavany. Satria misy hatrany ny fanitsiana noho ny zavatra diso na latsaka. Tsy mahazo mikitika voka-pifidianana ny Ceni fa afa-manao tatitra izay diso any amin’ny HCC. Ny HCC no manitsy izany.
Araka ny voalazan’ny lalàna, anjaran’ny HCC ny mamoaka ny voka-pifidianana. Koa miangavy ny kandidà tsirairay tsy hamoaboaka voka-pifidianana. “Manana zo hanao antontanisa ny kandidà fa tsy hamoaka voka-pifidianana, indrindra aoka tsy hasiana hoe: “Izaho no lany”. Mba misy fanetren-tena”, hoy izy.
Miankina amin’ny fahatongavan’ny antontan-taratasy ny vokatra
Miankina amin’ny fampiakaran’ny CMRV ny antontan-taratasy rehetra avy any amin-dry zareo mba hahazoana miasa, araka ny fanazavany. Rehefa tonga ny valin’ny avy amin’ny informatika, izay mety ho haingana be avy any amin’ny Ceni: tsy maintsy amarinina amin’ny fitanana an-tsoratra (PV) sy ny taratasy misy antontanisa. “Izay no tena asanay”, hoy izy.
Ny zava-baovao amin’ny fomba fiasa amin’izao fotoana izao eny amin’ny Ceni: tsy mamerina maka intsony ny voka-pifidianana ny HCC fa ny avy any amin’ny Ceni no raisina. Mifantoka avy hatrany amin’ny fanamarinana hoe marina sa diso ny voka-pifidianana omena azy ny HCC amin’izany. Ny dikan’izay, ny fitanana PV sy ny antontan-taratasy miisa 24 852 avy any amin’ny biraom-pifidianana tsirairay avy no tsy maintsy jerena.